इटहरीका ७९ वर्षीय कोरोना संक्रमितको कोभिड अस्पताल धरानमा मृत्यु - निष्पक्षखबर
विराटचोकः कोभिड अस्पताल धरानमा इटहरी–१ का ७९ वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सह प्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठका अनुसार उनी मुटु र मृगौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए । असोज २६ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनी असोज २७ गते कोभिड अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनको आज बिहान ३ बजेर ५ मिनेट जाँदा निधन भएको सह प्रवक्ता डा. आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
स्कारपिओ दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु